तीन दिन विद्यालय बन्द गरी तीज मेलागर्न लगिएकोमा असन्तुष्टि ! – ebaglung.com
२०७४ भाद्र ५, सोमबार १०:३४	Top News, थप समाचार
महेन्द्र केसी, पर्वत २०७४ भदौ ५ । परम्परा देखी चलिआएका संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य हो तर विद्यालयनै बन्द गरी संस्कृति बचाउने नाउमा कार्यक्रमको आयोजना गर्नु भने पक्कै राम्रो होइन । तर पर्वतको एक माध्यमिक विद्यालयमा यस्तो गलत कार्य हुन गैरहेको छ ।
पकुवामा रहेको वीरेन्द्र माविमा यतिबेला ३ दिनसम्म विद्यालयनै बन्द गरी तीज कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ । कुश्मा नगरपालिका ११ पकुवाका स्थित सो बिद्यालयमा लामो समयदेखि प्रअको बिवाद कामय रहेकोमा राजिनामा दिएका शिक्षक गणेशराज पौडेलले आफु प्रअ. भएको भन्दै पत्र काटेर क्लबलाई कार्यक्रम गर्नको लागि अनुमति दिएको बुझिएको छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने मनासयले एकाएक विद्यालयनै बन्द गरी कार्यक्रम संचालन गर्न खाजेपछि स्थानीयहरुले यस्को विरोध जनाएका छन् ।
पकुवा युवा क्लबको आयोजनामा विद्यालयको पं्रराङ्गणमा हुन लागेको तीज मेला अयन्त्र सार्नको लागि समेत दबाब आउन थालेको छ । कुनपा ११ पकुवाका वडा अध्यक्ष शिव पौडेलले बिद्यालयमा प्रधानाध्यापक नै नभएको अबस्थामा राजीनामा दिएको मानिसले कार्यवहाक भन्दै पत्र काटेर बिद्यलायलाई भताभुंग पार्न खोजेको आरोप लगाए ।
प्रधानाध्यापक नभएको मौका पारी कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना बनाई विद्यालयनै बन्द गराउन खोज्नु विद्यालयलाई धरासायी बनाउन खोज्ने प्रयास हो उनले भने ।
क्बलले भने विद्यालयकै सहमतिमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको जनाएको छ । यता जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेलले भने बिद्यालयलाई प्रयोग गरेर यस्ता खालका कार्यक्रमहरु गर्न नपाईने र त्यस बिषयमा आफुलाई कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिने बताए ।
प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन मंसिर १० गते एकै चरणमा